साउनदेखि बैंकहरुको आधार व्याजदर बढ्दै
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरुको आधार व्याजदर बढ्ने भएको छ। कर्जा तथा निक्षेप दुवैमा बैंकहरुको व्याजदर वृद्धि भएसँगै आधार व्याजदर पनि बढ्ने भएको हो। सिद्धार्थ बैंकले आगामी साउनदेखि आधार व्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्नेगरी सूचना जारी गरेको छ।
निश्चित सीमाभन्दा तल नजानेगरी तय गरिएको दर नै आधार व्याजदर हो। बैंकले उद्योग तथा व्यापारका लागि दिँदै आएको ओभरड्राफ्ट लोनमा आधार व्याज साढे २ देखि ६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने भएको छ।
सिद्धार्थ मात्रै नभई अन्य बैंकहरुले पनि कर्जा तथा निक्षेपमा व्याजदर बढेसँगै आधार व्याजदर बढाउने छन्।
निक्षेपमा व्याजदर बढाएपछि त्यसले कस्ट अफ फण्डमा असर पार्ने र ऋणको व्याज पनि स्वभाविक रुपमा बढ्न जान्छ। जसले गर्दा आधार व्याजदर बढ्न जान्छ।
मौद्रिक नीतिले व्याजदर घटाउनका लागि कुनै सहयोग नपुर्याएको र बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड बढेकाले आधार ब्याजलाई असर परेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए।
‘विभिन्न अनुपातलाई व्यवस्थापन गरेर कर्जाका लागि रकम बढाउन सकिन्थ्यो, कमसेकम त्यसले व्याजदर नियन्त्रण गर्थ्यो र आधार व्याजदर नै बढाउनुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो, तर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति यथास्थितिमै रह्यो’ उनले भने।
आफूहरुको प्रयास व्याजदर नबढाउनेमै केन्द्रित रहेको उनको भनाई छ। ‘बैंकमा कति निक्षेप आउन सक्छ, आगामी दिनहरु त्यसमा भर पर्ने कुरा हो’ शाहले भने।
विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा सम्पूर्ण व्याजदरमा प्रभाव परेको उनले स्पष्ट पारे। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको ३ खर्ब ११ अर्ब विकास बजेटको आधा रकम खर्च हुन सकेको छैन।
जसले गर्दा बैंकमा निक्षेपको वृद्धिदर बढ्न नसकेको हो। जेठदेखि असोजसम्म निक्षेप उच्च दरमा आउनुपर्ने भए पनि सो अनुरुप आउने संभावना नदेखिएको बैंकर्स बताउँछन्। ‘विकास बजेट पर्याप्त खर्च हुन सकेमा बैंकमा रकम आउने हो, तर खर्च नै हुन नसकेपछि त रकम अभाव हुन जान्छ’ शाहले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा वैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १६. ६ प्रतिशतले बढेको छ। भने कर्जा प्रवाह २४. १ प्रतिशतले बढेको छ। असारमा यो कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढ्ने अनुमान छ। तर साउनदेखि भने पुनः नयाँले पनि कर्जा लिने भएकाले कर्जा रकम बढ्न थाल्ने बैंकहरुले बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २९, २०७४, ०२:२५:४२